CD Cover Kan sameeyey - Dhig Own CD Cover Online for Free
> Resource > DVD > Top Shabakadaha in Samee CD daboolaa Online
Cover CD iyo kiiska CD ilaalin karo iyo kobo aad CD / DVD saxanno, oo waxaa jira bannaan badan si ay meel u macluumaadka loo baahan yahay. Waayo, ganacsiga CD / DVD, hore ee cover ugu fiican in uu soo bandhigo magaca record iyo qaar ka mid ah macluumaad kale sida brand, logo, sawirada, iyo wixii la mid ah. Wixii aad leedahay CD / DVD dabool, macluumaadka uu noqon karo shakhsiga ah iyo hal-abuurka ay ka buuxaan. Halkan, waxaanu kuu soo jeedinaynaa doonaa hogaanka 3 cover CD online gaare - diiwaangelinta ma, rakibaadda lahayn, oo gebi ahaanba bilaash ah.
Tag aad music, ku dar music cover tahay, tirtirto tus, oo ka saari maqan / kuwan raadkaygay jabay si toos ah. TunesGo gubi karaa heeso aad jeceshahay ka CD-computer ama kala duwan si ay hal CD. Samee aad caado shakhsi mixtape CD si fudud! Baro More >>
# 1 Online CD Cover sameeyey, CD / DVD Cover abuura - customizable
CD / DVD Cover abuura waa sahlan cover CD gaare aad ku qorshayso aad daboolida CD / DVD gaar ah ama buug ka dibna si toos ah iyaga daabac leh printer aad ku rakiban. Ka dib markii la daabacay cover CD / Buuggan yar warqad ah, waxaad iska jar laga yaabaa adigoo raacaya tilmaamaha. Qaar badan oo Layouts arrimo la siiyaa Doorashadaada iyo pad sawirka aasaasiga ah ayaa sidoo kale kaa caawiyaan in aad ku qorshayso aad ah shakhsi cover CD / Buuggan yar.
Samee aniga ii gaar ah cover CD online for free hadda >>
# 2 Online CD Cover sameeyey, PaperCDCase - Easy & wargelin ah
PaperCDCase kaa caawinaysaa in aad si fudud ku dari ama dajiyaan macluumaadka si ay u abuuraan PDF files elekterikal kaas oo noqon kara duubnaadaan si ay u sameeyaan xaaladaha CD . Website wuxuu bixiyaa maqaal in uu ku tuso sida loo laab kiiska warqad daabacan. Isticmaalka foomka Advanced, waxa kale oo aad tusin karnaa macluumaadka sida dirista macluumaad kuwan raadkaygay iyo naqshadeynta yar.
Samee dabool CD shakhsi online hadda >>
# 3 Online CD Cover Download: CD daboolaa - Download in Print
CDCover.cc sheegtay in website ee dunida ugu weyn ee daboolida CD album . Waxaad ka raadsan kartaa tiro badan oo ah daboolida music iyo movie CD, oo lacag la'aan ah. Ka dib markii ay soo bixi in computer, daabacdo la adiga kuu gaar ah software print. Ma aan helin wax Customization on goobta. Plus, dhowr kaliya Kadib waxaa taageera siday u kala ogaysiis: Firefox 1.5, 2.0; Internet Explorer 6, 7; Opera 9.10.
Isku day album free cover abuure online hadda >>
Hadda, marka hore cover CD maqan yahay, ama aad ku abuureen ah DVD movie oo macmal ah , ha iloobin qorshee DVD dabool shakhsi. Waxaa sidoo kale meesha si ay u muujiyaan shakhsiyadaada.
Eeg sidoo kale : Samee CD Cover ka marto ee Mac